Gbasara Anyị - DNS Yeson Group Co., Ltd.
YESON bụ ụlọ ọrụ otu. Ndị enyemaka ya nwere ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na ahụike ọkachamara na ụlọ ọrụ ọkachamara na-ebubata na mbupụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ nke ugbu a na-ejikọta nyocha nke teknụzụ na mmepe, mmepụta, ahịa na mgbe azụsịrị ọrịre. Ọ na-ahụ maka mmepụta nke masks diski diski, bra95, uwe aka, uwe na-echebe, goggles na ngwaahịa ndị ọzọ. Eji ya mee ihe n'ụzọ bara uru na mgbochi ọrịa, nlekọta onwe ya, nchebe ụlọ ọrụ. Factorylọ ọrụ ahụ kpuchitere mpaghara 4,000 square, nwere usoro mmepụta tozuru oke, igwe 30 na ndị ọrụ mmepụta 150. Ngwaahịa ahụ enwetala asambodo CE na asambodo FDA, ma erere ya Russia, United States, Australia, Mexico na mba 45 ndị ​​ọzọ gburugburu ụwa. Ọ tụkwasịrị obi ma too ya site n'aka ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi.
Na mgbakwunye, YESON ejirila nlezianya wuo ndị ahịa na ndị otu ọrụ raara onwe ha nye nwere ahụmịhe bara ụba. Ọ bụghị naanị na anyị ga-egbo mkpa nhazi nke ndị ahịa, kamakwa nye ndị ahịa ọrụ dị elu na ọrụ dị elu. N'otu oge ahụ, dị ka mgbanwe nke ahịa si dị, anyị na-enweta ụlọ ọrụ na-ejikọ aka mgbe niile iji meziwanye asọmpi otu a. Ka azụmahịa ahụ na-eto, Yeston Group abụrụla otu n'ime ụlọ ọrụ na-ebubata na mbupụ na China.
YESON kwekọrọ na onye ahịa ahụ, ụkpụrụ azụmahịa azụmaahịa na njikwa ike dị mma, anyị na-etinye onye ahịa anyị mbụ, na-aga n'ihu na-amụta ma na-emepụta ihe ọhụrụ, ma na-enye ngwaahịa na ọrụ kacha mma. Iji hụ na ngwaahịa kachasị dị elu, anyị na-eme ngwa ngwa ọhụụ na teknụzụ. A na-anabata ndị enyi niile ileta anyị, anyị kwenyere na anyị ga-abụ ezigbo onye mmekọ n'ọdịnihu.
Adreesị: No.95 Qilian Street, Shijiazhuang, Hebei, China
Tẹ: 86 311 6769 5456
Faksị: 86 311 6769 5455
Ozi E-mail yesonmedical@gmail.com